Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Umsebenzi okude womfundi ngo-2022
Khawucinge ngobomi bakho bomfundi kunye nendlela yakho yemihla ngemihla:
1-ukuvuka kwisandi se-alam yakho (akusekho ntsasa yakusasa)
I-2- ukujonga ubuso obucacileyo kunye nokuhlaziya kwisibuko (ulale kakuhle ngaphandle kokukhathazeka)
I-3- ukuchitha ixesha kucoceko lomntu (thatha ixesha elininzi okanye elincinci njengoko ufuna)
4- ukonwabela isidlo sakusasa esimnandi nesinempilo (akukho sidingo sokuphuma ungxamile endlwini unesisu esingenalutho)
5- ukuya esikolweni ngeyona ndlela isebenzayo onokuyifumana (usuku lwasimahla lwemoto!)
6- ukuzibandakanya kumava okufunda anentsingiselo naguqukayo kunye noontanga bakho (akusekho ukuphupha emini)
7- usenalo ixesha lokuchitha nosapho kunye nabahlobo (i-hangout phambi okanye ukuphuma kwesikolo)
8- ukwenza imisebenzi ejikeleze indlu (thenga igrosari okanye uthumele itekisi kumama ukuba uzakuba sekhaya emva kwexesha kunokuba bekulindelwe)
9- ukwenza usuku lwakho lonke lube lula kwaye lungakhathali (yenza zonke izinto ongazange ubenalo ixesha lazo)
I-10-ukufundela olo viwo luzayo (akusekho ntloko ebuhlungu ngenxa yokukrala ebusuku)
I-11-ukufunda incwadi elungileyo ekupheleni kosuku (akusekho bunzima bamehlo ekusebenzeni kwizikrini imini yonke)
I-12-ukulala ngokulula kwaye ulale ngokunzulu (uhambe kakuhle kobo busuku bokungalali buzikhathaza ngesikolo!)
Ngoku khawube nomfanekiso-ngqondweni wehlabathi apho ezi zinto zinokwenzeka khona.
Kwabanye, inokuba sele iyinyani, kodwa kuthi thina basajongene noxinzelelo kunye nokudinwa kokulinganisa isikolo kunye nomsebenzi, siyazi ukuba utshintsho lokwenyani luseza.
Iindaba ezimnandi zezokuba itekhnoloji isebenza ngendlela yayo ekuphuculeni ubomi bethu ngeendlela ebesingenakuzicingela kwiminyaka elishumi eyadlulayo.
Itekhnoloji ngoku iyafumaneka ukusombulula iingxaki ezininzi abafundi abajongana nazo, ngakumbi abo bakhubazekileyo. Njengoko iinkqubo ze-cyber-physical ziguquka kwaye ziba nzima ngakumbi, zithembisa ukuguquguquka okukhulu kunye nokuguquguquka kwindlela esisebenza kunye nesiphila ngayo. Ukukwazi kwabo ukuhlengahlengisa okanye ukususa igalelo lomntu kwenza kube lula kubantu abakhubazekileyo ukuba boyise imiceli mngeni engeyiyo.
Ngoncedo lwetekhnoloji, abantu abakhubazekileyo bayakwazi ukoyisa imiqobo yobuqu, baphile ubomi obuzimeleyo kwaye bafake isandla ngokufanelekileyo kuluntu lwabo.
Itekhnoloji inokwenza umsebenzi okude ube nokwenzeka ngo-2022 kubafundi kwesi sizukulwana ngokuququzelela intsebenziswano phakathi kwabasebenzi abasebenzisanayo nokuba baphi na emhlabeni kunye nokuvumela abafundi abakhubazekileyo ukuba babe neeshedyuli eziguquguqukayo.
Khawucinge nje ukuba lingakanani ixesha elinokongela abafundi abakhubazekileyo ukuba babenokwenza umsebenzi wabo wesikolo owenzelwa ekhaya ngaphambi okanye emva komsebenzi ngaphandle kokuba babuye baye esikolweni.
Ngeenkqubo zokupaka ezikude, njenge paytowriteessays.com, kwanabo banemingeni yobuchwephesha banokwenza imisebenzi efana nophando lwe-intanethi kunye nokubhala ekhaya.
Umsebenzi okude unokungaxhaphakanga njengeendawo zanamhlanje zokusebenzisana, kodwa ngokuqinisekileyo linyathelo eliya kwicala elifanelekileyo. Ithathela ingqalelo abo bethu bangenako ukungena eklasini yonke imihla kwaye ivumela aba bafundi ukuba basebenze kweminye yemisebenzi efana neyoontanga babo (uphando lwe-intanethi kunye nokubhala) kunye/okanye balandele eminye imidla.
Umsebenzi okude unokungabi ngowawo wonke umntu ngo-2022, kodwa yinyani enokwenzeka kubafundi abakhubazekileyo abafuna ukulandela imfundo yasemva kwesekondari. Yinto enokusithatha isingise ekubeni luluntu olubandakanya wonke umntu olunceda wonke umntu ngaphandle kokwahluka kwabo.
Itekhnoloji inamandla okutshintsha ubomi bethu ngeendlela umntu anokucinga ngazo kuphela, kodwa inamandla okuphucula ubomi ngeendlela ezingenakucingelwa. Umsebenzi okude yenye indlela itekhnoloji enokunceda ngayo abafundi abakhubazekileyo, kodwa maninzi amathuba angaphaya.